Umdibaniselwano ozimeleyo: yintoni, iimfuno kunye nendlela yokwenza ngokusemthethweni | Ezezimali
Iya isanda ngokuxhaphaka into yokuba iinkampani ziqeshe kambalwa kwaye zikhethe abantu abazimeleyo ukuba bonge ukuhlawulela umsebenzi, iholide, ukukhubazeka okwethutyana, iimvume ... Wonke umntu uyazi ukuba umntu ozisebenzelayo akanazo ezo zinto kuba ichaphazela ngqo uqoqosho lwabo. Kodwa, into ongayaziyo kukuba njenge-freelancer ilungu losapho lwakho linokuba ngumlingani ozimeleyo.
Ngoku, Yintoni umhlanganisi osebenza ngokuzimeleyo? Zithini iimfuno zakho? Ingenziwa njani? Sichaza yonke into kuwe.
1 Yintoni umhlanganisi osebenza ngokuzimeleyo
2 Zithini iimfuno zomntu osebenza ngokuzimeleyo
3 Zeziphi izibonelelo ezinazo
4 Ungabhalisa njani njengomdibanisi osebenza ngokuzimeleyo
4.1 Into ekufuneka yenziwe ngumsebenzi ozisebenzelayo "wexesha elizayo"
4.2 Kufuneka enze ntoni umnini
Yintoni umhlanganisi osebenza ngokuzimeleyo
Into yokuqala ekufuneka uyazi malunga nomlingane ozimeleyo yile nto bayithethayo ngeli gama. Ngokukodwa, sithetha ngomntu ohambelana nomntu oziqeshileyo, isihlobo esihlala kunye nesisebenza naye ukumnceda kwishishini.
Enyanisweni, Kufuneka inxulumene nenqanaba lesibini lokutya okanye ukwamkelwa. Oku kuthetha ukuba umntu osebenzisana naye ozimeleyo unokuba liqabane, unyana, umzukulwana, umntakwabo, utat'omkhulu, umkhwenyana, umkhwe, njl.
Ngokwenyani, yingxubevange yomntu oziqeshileyo ngenxa yazo zonke iinjongo zomntu lo uya kuhlawuliswa irhafu njengomntu oqeshiweyo nangona eza kubhaliswa njengomntu oziqeshileyo (kwaye ke kuya kufuneka ahlawule iifizi).
Zithini iimfuno zomntu osebenza ngokuzimeleyo
Nangona ngaphambi kokuba sihlambe ezinye zeemfuno ezinyanzelekileyo, siza kuzaphula zonke kuba zininzi:
Yiba sisihlobo somnini-msebenzi ozimeleyo. Njengoko besitshilo ngaphambili, ukuya kuthi ga kwinqanaba lesibini lokutya okanye ukwamkelwa.
Hlala kwikhaya elinye kwaye uxhomekeke kulo mnikazi uziqeshileyo. Ngamanye amagama, ilungu losapho alinakho ukuzimela ngaphandle kobomi babo ekubeni bavele emsebenzini abawenzayo nalo mntu uziqeshileyo.
Yenza umsebenzi wamaxesha athile, hayi ngexesha elinye.
Ungabi ngaphantsi kweminyaka eyi-16. Ngapha koko, kude kube ngu-2020 bekukho umda wobudala (ubuninzi bokuqesha) kodwa oku kuyekisiwe kwaye ngoku abantu abazisebenzelayo abaneminyaka engama-30, 40, 50 okanye engama-60 ubudala banokuqeshwa ngaphandle kwengxaki.
Bobabini babhalisiwe kwiRegime yaBasebenzi abaziQeshelayo (RETA) kwaye banegalelo inyanga nenyanga. Ngapha koko, kunokuvela intandabuzo malunga nokuba umntu osebenzisana nomntu ozimeleyo kufuneka azenzele ngokwakhe umsebenzi wakhe wokuqala okanye avunyelwe ukuba abhalise nangona sele kuyiminyaka oko esenza okokuqala (apha uya kuba ukuya kuKhuseleko lweNtlalo ukufumanisa isikali ngokutolika le mfuno). Ngamanye amagama, ayaziwa ngokwenyani ukuba enye yeemfuno kukuba isihlobo asikaze sizimele ngaphambili; okanye ukuba kukho ixesha apho engazange azimele.
Ungabhaliswa njengomqeshwa. Ngamanye amagama, ukuba umntu osebenzisana naye ngokwakhe unomsebenzi njengomqeshwa, oku kuyabenza bangabinakho ukuba ngabasebenzisanayo. Kwaye yile, okwangoku, ngokomthetho imisebenzi emininzi ayisekelwanga olu hlobo lweemeko.
Zeziphi izibonelelo ezinazo
Nangona eli nani lingaziwa kakuhle, inyani kukuba ineebhonasi ezininzi. Umzekelo, eyokuqala, kwaye eyona ibalulekileyo, yeyona nto ikhoyo I-50% isaphulelo kwimirhumo ezizimeleyo iinyanga ezili-18 zizonke, ukuba nje ngumntu omtsha ozisebenzelayo. Kwaye kwi-6 elandelayo ibhonasi iya kuba ngama-25%.
Ukongeza, kuya kuba njalo uxolelwe ekungeniseni i-VAT ngekota kunye neerhafu zerhafu yomntu kwaye konke okufuneka ukwenze kukubuya kwerhafu yengeniso.
Ngoku kukho into enye embi. Kwaye eli qela alinakufikelela kumgangatho othe tyaba wama-euro angama-50, njengoko abanye abantu abaziqeshileyo benokhetho.
Kumnini-msebenzi ozimeleyo, unokucinga ukuba akukho zibonelelo, kuba kuya kufuneka bahlawule isabelo sabo kunye nesihlobo, ukongeza kumvuzo. Kodwa kuya kufuneka uyazi loo nto Umvuzo kamva ubhalwa njengeendleko ezitsalwayo kwimbuyekezo yerhafu, into elungileyo leyo kubo.
Kodwa ayiphelelanga apho. Uya kuba nayo ibhonasi yomrhumo weshishini kwizinto ezingxamisekileyo eziqhelekileyo kwiinyanga ezili-12 ukuba sisivumelwano esisigxina. Kwaye ukufezekisa njani oko? Ewe, kuya kufuneka uqiniseke ukuba umdibanisi ozimeleyo akazange aqeshwe ngaphambili phantsi kweli nani (kwisithuba seminyaka emihlanu). Ngoku, le meko kufuneka igcinwe ubuncinci iinyanga ezintandathu, kwaye ekuphela kwendlela yokuyiphelisa iya kuba:
Ukugqitywa komsebenzi, inkonzo okanye iprojekthi.
Ungabhalisa njani njengomdibanisi osebenza ngokuzimeleyo
Ukuba emva kwayo yonke into esithethile ngayo, ucinga ukuba eli nani lelinye lawona matyala akho, kuya kufuneka wazi ukuba iinkqubo zokwenza oko zilula kakhulu. Ewe kunjalo, bobabini abanini abazimeleyo kunye nomntu oza kuba ngumdibanisi osebenzela yena kufuneka benze njalo.
Into ekufuneka yenziwe ngumsebenzi ozisebenzelayo "wexesha elizayo"
Nokuba yeyiphi. Ke, ngaphandle kokuqhubeka. Umntu oza kuba ngumlingani ozimeleyo akukho mfuneko yakwenza nto. Akunyanzelekanga ukuba ubhalise kwiRETA, okanye kwiArhente yeRhafu.
Konke oku kuwela kumninimzi ozisebenzelayo, ngubani ekufuneka enze inkqubo, kodwa sele sikuxelele ukuba kulula kakhulu kwaye yenziwa ngemizuzu.
Kufuneka enze ntoni umnini
Ngoku masithethe ngomnini, umntu "oqeshayo" ngendlela yelungu losapho. Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukubakho Umzekelo TA0521 / 2, nokuba buqu kulawulo loKhuseleko lweNtlalo okanye wenze le ntetho kwi-intanethi kwiwebhusayithi yabo.
Kolu xwebhu, okwenziweyo kukwazisa uKhuseleko loLuntu ukuba lukhona utshintsho, oluya kuba kukuthatha umntu ozisebenzelayo. Ukwenza oku, uya kudinga oku kulandelayo:
Ubhaliso lwakho kwi-Ofisi kaNondyebo (njengomnini).
Akukho nto yimbi, nje ukuba le nkqubo ihanjisiwe, ilungu losapho lwakho sele liza kuthathwa njengomdibanisi ozimeleyo kwaye kuya kufuneka uhlawule imirhumo yoku (kunye nebhonasi ekhoyo, ewe) ukongeza kumvuzo. Ewe, kubalulekile ukuba umnike irhafu yenyanga nenyanga kuba la maxwebhu ayakufuneka kamva ukwenza ingxelo yengeniso yonyaka.
Ngoku ukuba uyazi umlingani wabasebenzi ozimeleyo, ngaba uyabona ukuba kufanelekile kwimeko yakho? Sazise.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Uqoqosho ngokubanzi » Ngqesho » Umncedisi ozisebenzayo